Nenhandare iri muropa. Shamwari yangu munyori, mutambi uye director Mari Carmen Rodríguez. | Zvazvino Zvinyorwa
Shongwe yechechi yeSanta Catalina. La Solana (Ciudad Chaiye). Mufananidzo we (c) Mariola Díaz-Cano.
Nhasi uchanditendera kuti ndisiye parutivi wongororo, mhemberero, nhau kana ongororo yezvakanaka zvinyorwa zuro, nhasi namangwana. Pasika yapfuura, mumwe anoenda kuguta rake uye kazhinji anobatana zvakare neshamwari dzichiripo kwechinguva chidiki. TO imwe yeshamwari idzodzo, kubva paudiki, chinyorwa ichi chakatsaurwa.
Kupfeka yemitambo muropa uye kuve iye munyori, mutambi uye director wemabasa ake, pamusoro pekugadzirisa kana kutora chikamu mune zvimwe. Senyaya yako, zvirokwazvo pachave nemamwe akawanda. Vasingazivikanwe vatambi vemitambo kubva kune dzimwe nzvimbo zhinji, vasingazivikanwe neruzhinji asi vachizivikanwa kwazvo neavo Anoziva seasina imwe yeiyo idiosyncrasy yeguta nevagari vayo uye vanokwanisa kuzviratidza uye kuzviratidza munzira nhatu. SaMari Carmen Rodríguez. Inoenda kune vese.
4 Saka ...
Ndakaziva Mari Carmen kubvira patakanga tine makore manomwe ekuberekwa uye ndakasvika semudzidzi mutsva pachikoro cheSan Luis Gonzaga mutaundi rangu. Ngatitaurei izvo nguva diki yapfuura. Pazera iro, uye kuve mutsva, zvese zvinosvika pakujairana, kusangana nevamwe vasikana uye kuita shamwari dzekutanga. Iyo San Luis Gonzaga ipapo haina kusanganiswa uye kumhanya neVasikana veCharity. Ndangariro dzangu dzekutanga dzakajeka kwaari ndeve 3º yeEGB kumuona achinyora pabhodhi apo Sista anoshamisa Emilia vakatiita kuti tibude. Mari Carmen ndiye kuruboshwe uye ndakanakidzwa kumuona.
Gare gare, kuratidza zvese kuzvivimba uye kugona, yemapati echikoro paKisimusi kana kupera kwegore, Mari Carmen ndiye aibata basa rekunyora mitambo yake. Uyewo, Ini ndakasarudza iyo cast pakati izvo zvataida kutora chikamu uye akatipa mavara chaiwo zvichienderana nehunhu hwedu (uye chitarisiko). Eheka, akatitungamira uye akachengetera chikamu chechipiri asi nekurema.
Aigara achindipa basa remukomana akanaka uye akanaka aive mukomana, shamwari kana kubatsira protagonist. Nekuti zvirokwazvo, lMavara echirume takavaita kunge echinyakare echiGreek asi vachidzokera kumashure. Ini ndaingofara kupenda masharubu necork yakatsva ndokupfeka bhachi netayi kubva kuna baba vangu. Kuti ini ndawanawo bepa rakadai ndiro raive rekupedzisira sadza.
Musoro unoramba wakamira mundangariro dzangu yeimwe yeaya mabasa ndeye Chepfu kurwisa chepfu, iyo yatove inotaura zvakawanda nezve izvo zvinogona kuenda. Paigara paine chakavanzika, mhosva kana kukanganisa izvo, zvakasikwa, zvakaguma zvagadziriswa uye zvakanaka.
Nedudziro muropa rake, ndinosimbisa kuti kugona kwaMari Carmen kuri kuramba kuri kunyora mitambo yake, kuitungamidza nekuiturikira, iye zvino ari mumusangano wake, Iyo colosseum casserole, mukati mesangano KUSVIRA (Sangano reMhuri uye Vakadzi vekumaruwa), iyo yaanogara. Uye zvakare, icho chikamu chekambani yeslanera theatre Margarita Xirgu.
Mukambani Margarita Xirgu.
AtrabilisNaLaila Ripoll. Iye airidza anorwadza uye ane shanje spinster anonzi Daria.
Matiles eGreen. Monologues. Akateedzana mavara anotsoropodza kushungurudzwa kwakaitwa muChile panguva yaPinochet. Ndiye aive Taura-ngano.
Madhamu, NaIgnacio del Moral naVerónica Fernandez. Ndaigona kumuona achidudzira zvinehunyanzvi Mari Cruz mupanduki.
Imba yaBernarda Alba, kubva kuLorca, kwaive naMartirio.
Vamwe rudo rwusingaurayerakanyorwa naDulce Chacón. Monologues anopesana nechisimba chechikadzi.
Mune AFAMMER Sangano:
Sainetes ehama Alvarez Quintero se Kamuri diki reawa, Ropa rakakora, Makakatanwa nenyaya dzerudo.
Ndiri murume, de Carlos Arniches.
Mashoko ari mujecharakanyorwa naAntonio Buero Vallejo.
Basa rako iro rakamirirwawo:
Zarzuelas kuchinjika Chemhondoro Dare raFarao, Izwi rechiito renjiva, Giants uye misoro mikuru o Vapfumi nevasingatendi kuti kuna Mwari naArniches.
… Chii uyu mufananidzo unoshanda sekurudziro uye kuzivikanwa kune vese vanyori vakaita saiye. Uye pamusoro pezvose mufaro kuramba uchiverenga pahukama hwako. Tinogona kupedzisira taita chimwe chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Nenhandare iri muropa. Shamwari yangu munyori, mutambi uye director Mari Carmen Rodríguez.
Zvimwe zvinyorwa zvakaita seizvi zvinodikanwa kuti uone avo vanofarira zvehunyanzvi nerupo rwehukuru! Ole kwako Carmen! Uye nekuda kwako, Mariola, tiudze
Kazhinji kukanganisa nyora nyowani kana uchinyora bhuku redu
Maitiro ekuvaka ekunyora mavara